Noa Nsɛm—Tete Kɔkɔbɔ Bi
KENKAN WƆ Abkhaz Adhola Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ateso Aukan Austrian Sign Language Awajun Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Blackfoot Boulou Cakchiquel (Central) Cambodian Carib Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Frafra French Futuna (East) Ga Garifuna Georgian German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Guatemalan Sign Language Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kachin Kenyan Sign Language Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kisi Korean Krio Kwanyama Laotian Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Madagascar Sign Language Malagasy Mam Mapudungun Mauritian Creole Mbunda Medumba Mexican Sign Language Mizo Moore Mozambican Sign Language Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nepali New Zealand Sign Language Nias Niuean Norwegian Norwegian Sign Language Nzema Oromo Ossetian Panamanian Sign Language Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sarnami Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Swahili Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tatar Thai Thai Sign Language Tigrinya Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Wallisian Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Tete Kɔkɔbɔ Bi
Yehowa remma kwan mma nnebɔneyɛfo nsɛe Paradise no. Ne nnamfo nkutoo na wɔbɛtra hɔ. Dɛn na ɛbɛba nnebɔneyɛfo so? Ma yensusuw Noa asɛm a esii ankasa no ho na ama yɛanya mmuae no. Noa traa ase mfe mpempem pii a atwam ni. Ná ɔyɛ onipa pa a ɔbɔɔ mmɔden denneennen bere nyinaa sɛ ɔbɛyɛ Yehowa apɛde. Nanso nnipa foforo a na wɔwɔ asase so no yɛɛ nneɛma bɔne. Enti, Yehowa ka kyerɛɛ Noa sɛ Ɔde nsuyiri bɛba abɛsɛe saa nnebɔneyɛfo no nyinaa. Ɔka kyerɛɛ Noa sɛ ɔmpam adaka na sɛ Nsuyiri no ba a ɔne n’abusua anwu.—Genesis 6:9-18.
Noa ne n’abusua pam adaka no. Noa bɔɔ nkurɔfo kɔkɔ sɛ Nsuyiri no reba, nanso wɔantie no. Wɔkɔɔ so yɛɛ nneɛma bɔne. Bere a wɔpam adaka no wiei no, Noa de mmoa kɔɔ adaka no mu, na ɔne n’abusua nso kɔɔ mu. Afei Yehowa maa ahum kɛse bi tui. Osu tɔe nnafua 40 awia ne anadwo. Nsu no yiri faa asase so nyinaa.—Genesis 7:7-12.
Nnebɔneyɛfo no hweree wɔn nkwa, nanso wogyee Noa ne n’abusua nkwa. Yehowa koraa wɔn so wɔ Nsuyiri no mu na ɔde wɔn kɔɔ asase a wɔapopa nsɛmmɔnedi afi so so. (Genesis 7:22, 23) Bible ka sɛ bere bi bɛba bio a Yehowa bɛsɛe wɔn a wɔnyɛ nea ɛteɛ no. Wɔrensɛe nnipa pa. Wɔbɛtra ase daa wɔ Paradise asase so.—2 Petro 2:5, 6, 9.
Nnipa pii yɛ nneɛma bɔne nnɛ. Ɔhaw ahyɛ wiase ma. Yehowa soma N’adansefo mpɛn pii ma wɔkɔbɔ nkurɔfo kɔkɔ, nanso wɔn mu dodow no ara mpɛ sɛ wotie Yehowa asɛm. Wɔmpɛ sɛ wɔsakra wɔn akwan. Wɔmpɛ sɛ wogye nea Onyankopɔn ka fa nea ɛteɛ ne nea ɛnteɛ ho no tom. Dɛn na ɛbɛba nnipa yi so? So wɔbɛsakra da bi? Wɔn mu pii rensakra da. Bere no reba a wɔbɛsɛe nnebɔneyɛfo nyinaa na wɔrentra ase bio.—Dwom 92:7.
Wɔrensɛe asase; wɔbɛma adan paradise. Wɔn a wɔbɛyɛ Onyankopɔn nnamfo no bɛtra ase daa wɔ Paradise wɔ asase so.—Dwom 37:29.
Share Share Tete Kɔkɔbɔ Bi